जापानी गार्डन को स्टोन
पूर्वी संस्कृति हाम्रो द्वारा दृढतापूर्वक भिन्न छ, र यो परिदृश्य को परिदृश्य वास्तुकला र डिजाइन हो। उनको जादुई उदाहरण मध्ये एक हो पत्थर को जापानी बगैचा, वा सेकिटे (सूखी बगैचा)। यो एक प्रकारको सांस्कृतिक र सौंदर्य संरचना हो जुन XV शताब्दीको आसपास जापानमा पुग्यो। त्यस्ता उद्यानहरू जेन बौद्ध धर्मको अवधारणाअनुसार बनाइएका छन्, एक धर्म जुन चीनबाट आयो र मुख्यतः मध्ययुगीन जापानीको जीवनमा प्रभाव पारेको थियो। यस्तो संरचनाको एक क्लासिक उदाहरण रेयनजी (क्योटो) को बौद्ध मन्दिरमा ढुङ्गाको बगैंचा हो।
पत्थरको जापानी बगैंचा सिर्जना गर्न नियम
यहाँ कुनै चिसो हरी वनस्पति छैन। यसको विपरीत, जापानमा ढुङ्गाको बगैंचा एक सट्टा आयताकार क्षेत्र हो, ठीक बालुवा वा बजरीको साथ। यस साइटमा, पोतहरू अनौठा ढुङ्गाहरू छन्। जेन बौद्ध धर्मले ढुङ्गाको स्थानको लागि आधारभूत नियमलाई स्पष्ट पार्दछ:
तिनीहरू3वटा ढुङ्गाका समूहहरूमा व्यवस्थित हुनुपर्छ, जसले बौद्ध ट्रयाकलाई संकेत गर्दछ;
वरिपरिका परिदृश्यको आधारमा ढुङ्गाहरू राखिएको छ, धेरै भवन, अल्ब, जलाशय र अन्य संरचनाको उपस्थिति;
कुनै पनि मामला मा पत्थर प्रसोधन गरिएको छैन, तिनीहरू केवल ध्यानपूर्वक तिनीहरूको बनावट, आकार, रङ अनुसार चयन गरिन्छ।
हरियो मासको द्वीपहरूमा ढुङ्गाहरू राख्ने अनुमति दिइएको;
पत्थर को आसपास, रैक रिंग grooves बनाउँछ, र बगैचा को पूरी सतह मा, रैखिक, साइट को लामो पक्ष संग चल रहे;
बागवानीलाई चिन्ता गर्ने आगन्तुकले बगैचाको कुनै पनि बिन्दुबाट बराबरको ढुङ्गा देख्नुपर्छ। दिग्गजको अनुसार, सबै ढुङ्गाहरू एकैचोटि मात्र "प्रबुद्ध" देख्न सकिन्छ।
जेनका शिक्षाहरूमा ढुङ्गाको बगैंचा एक ठाउँ हो जहाँ शान्तिले स्वभाविक प्रकृतिको विचार गर्दा व्यक्तिले ध्यानमा भोग्न सक्छ। यसको उद्देश्य - आफैमा विसर्जन, सरल को सपना का आनंद ले, तर चीजहरूको साँच्चै गहिरो अर्थ भरिएको। रेत र नचाहिने पत्थर यहाँ पनि यसको विशेष महत्व छ। फूरहरूले समुद्रको लहरहरू प्रतिनिधित्व गर्छ, र ढुङ्गा आफैलाई टापुमा फैलिएका छन्। यद्यपि, पत्थरको बागले मननको लागि डिजाइन गरिएको हो किनभने, उनको कल्पनामा आगन्तुकले यस सम्बन्धमा लगभग कुनै पनि संस्था सञ्चालन गर्न सक्छ।
कसरी जापानीहरू बगैंचाको आफ्नै हातमार्फत बनाउनुहुन्छ?
ढुङ्गाको बगैंचा बनाइयो र स्वतन्त्र रूपमा, सानो पर्वत क्षेत्र हुन सक्छ। यसका लागि, यो आवश्यक छैन कि तपाइँ सबै उपरोक्त आवश्यकताहरूको पालन गर्नु हो, जबसम्म तपाई हो भने, जेन बौद्ध धर्मको अनुयायी। भूमिको ठूलो साधन भएको, यसको कुनामा कहीं, बजरी र मास संग ढुङ्गाको शास्त्रीय बागको व्यवस्था गर्नुहोस्। यदि ठाउँ पर्याप्त छैन भने, तपाईं ढुङ्गाको जापानी बगैचा परिदृश्य डिजाइनको परम्परागत घटकसँग जोड्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ सुन्दर र असामान्य पौधहरू रोप्ने जुन तपाईंको साइट सजाउनु हुनेछ।
पत्थरको बगैचाको लागि राम्रो तरिकाले बत्तीको स्थान छान्नुहोस्। कथित रूपमा साइटलाई6भागहरूमा विभाजन गर्नुहोस् र संरचनामा विचार गर्नुहोस् जुन ढुङ्गाहरू अवस्थित हुनेछ। यसलाई क्रमशः व्यवस्थित गर्न सल्लाह दिइएको छ। जापानी बगैचाको लागि, यो प्राकृतिक पत्थर प्रयोग गर्न उत्तम छ - ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, शेल रक। कपाल रोप्ने पछि लाग्नु पर्छ। सदाबहारको रूखमा छनौट रोक्नुहोस्। पुरा तरिकाले चेरी वा बोन्साईको बगैचा सजाय, साथसाथै म्याग्लोलीस, इरिस र टुओनीहरू। पारंपरिक जापानी ल्यान्डस्केपको विशेष सान्त्वना र बाधालाई जोड दिन बिरुवाहरू संख्यामा कम हुनुहोस्।
तपाईं बागवानीलाई पनि सानो वास्तुकला रूपको रूपमा अभिमुखीय शैलीमा सजावट गर्न सक्नुहुन्छ: स्टोन कटोरेहरूको सुनुगुबाई, सानो पोर्चुगल- pagodas या एक सानो तालाब पनि।
सानो स्टोन गार्डन
तपाईं आफ्नो हात र घरमा ढुङ्गाको बगैचा बनाउन सक्नुहुन्छ। यो गर्न, एक सानो फ्ल्याक बक्स लिनुहोस्, राम्रो बालुवामा भर्नुहोस् र सुन्दर चित्रमा सानो कपालहरू व्यवस्थित गर्नुहोस्। तिनीहरू कृत्रिम वा प्राकृतिक मासका द्वीपहरूमा सुन्दर देख्छन्। बाल रेकहरू वा कपाल कपाल संग रेतलाई पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्, सर्कलहरू बनाउँदछ र "ड्युन्स" लाई लामो पार्नुहोस्। साथै, एक सानो जापानी उद्यान को पत्थर कोक्टी वा बौने फेर्न संग सजाया जा सकता है।
टमाटर "ब्ल्याक राजकुमार"
आर्किड - घरको हेरविचार पछि खरीद, गृह मर्मत नियम
प्याज "एक्जिबिशेन" - प्रसूति मार्फत बढ्दै
मालिना पेट्रिकिया - केयर र वृद्धिको विशेषताहरू
लोक उपचारका साथ एल्फ्ससँग लडाइँ
प्याटुनिया, बिरुवाहरूका लागि बीउ खेती गर्दै - मौसममा फ्लोरिस्टहरूको चालाक
वसन्तमा लन हेरचाह
किन geraniums को पातहरु लाई ब्लश गर्दछ?
शाखाहरूबाट समुद्री बाकस कसरी संकलन गर्ने?
Ficus - bonsai
अदरक घरमा कसरी बढ्छ?
कसरी अंगूर रोप्न?
लन्डन को बारे मा दिलचस्प तथ्यहरु
बालबालिका-जूनियर समूहमा नयाँ वर्षको बिहान बिहानको कार्यक्रम
Clematis - खुले मैदानमा रोपण र हेरविचार गर्नुहोस्
व्यक्तिको प्रकृति कसरी निर्धारण गर्ने?
मेगन मार्कल र प्रिन्स हैरी बेतुकुड छन्: दुलहीको रिंग र संलग्नता विवरण
चावल नूडल्स संग चिकन
आफ्नै हातले भान्सा - डिजाइनको लागि विचार
अदरक कसरी बढ्छ?
पञ्चमा फ्लिप फ्लपहरू
शौचालय कसरी छनौट गर्ने?
मल्टीवार्कमा स्टुड गरिएको लिङ्क
खुट्टा र जांघको लागि आहार
ख्रुश्चेभमा बस्ने कोठा
मन र हृदयको शान्तिको लागि प्रार्थना
प्रभाव प्रभाव पार्नुहोस्
केडीई के जस्तो देखिन्छ?